आयल निगमले नाफा कमाएको छैन, घाटामा काम गर्दैनः एमडी सुरेन्द्र पौडेल – Clickmandu
आयल निगमले नाफा कमाएको छैन, घाटामा काम गर्दैनः एमडी सुरेन्द्र पौडेल
क्लिकमान्डु २०७७ फागुन ५ गते १५:११ मा प्रकाशित
सुरेन्द्रकुमार पौडेल नेपाल आयल निगममा प्रवन्ध निर्देशकको रुपमा कार्यरत छन् । निगममा आउनु अघि उदयपुर सिमेन्टमा महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेलले घाटामा रहेको उदयपुर सिमेन्टलाई नाफामा लगेको थिए । धेरैले उनलाई उदयपुर सिमेन्टमा नयाँ कुलमान भनेर पनि विशेषण दिए । आयल निगमले पछिल्लो समय हरेक साता मूल्य बढाउन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि भएको भन्दै निगमले पनि त्यसलाई पछ्याएको छ । भारतीय आयल निगमले हरेक १५ दिनमा पठाउने मूल्यसूचीका आधारमा नेपालभित्र मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटदा घटाउन तयार नहुने निगम मूल्य बढदा भने बढाउन तयार हुने गरेको आरोप पनि लाग्छ, बेला बेलामा । निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली पनि लागू गरेको छ । त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएको विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि बिजुलीको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने देखिन्छ । यसमा नीति निर्माता मात्रै नभई स्वयम् निगमको पनि समान धारणा छ । यसै सन्दर्भमा निगमको भावि योजना र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको कारण पर्ने आर्थिक तथा सामाजिक असरको विषयमा पौडेलसँग क्लिकमाण्डूका लागि आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको अंश ।
विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएको छ । बढी नाफा गर्ने निगमका असजिला दिन शुरु भएका हुन् ?
निगमले कहिले पनि धेरै नाफा कमाएको छैन । गतवर्ष निगमले १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको हो । जसमा ४ अर्ब जनतासँग लिएको पैसा होइन । ८ अर्ब नाफा भयो । २ खर्ब ३० अर्बको व्यापारमा ८ अर्ब नाफा ५ प्रतिशत भयो । नेपालमा कुन व्यवसायले ५ प्रतिशत नाफामा मात्रै काम गरेका छन् ? बैंकको नाफा नै हेरौ, उसले कति कमाएको छ ? निगमको नाफा धेरै कमायो भन्नु गलत हो । वीर अस्पतालले पनि उपचार गर्न आउनेसँग केही शुल्क उठाएको हुन्छ । के त्यसलाई नाफा कमाएको भन्ने ? यो संरचनाले आफ्नो लागत रिकभरी गरेको हो । असजिलो स्थितीमा त्यसलाई प्रयोग गरेको हो ।
निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ । तर, हिजो मूल्य घट्दा त्यो लाभ दिनु भएन । अहिले बढ्दा मात्रै हरेक साता बढाउन थाल्नुभयो नि ?
निगमले कारोबारको जम्मा ५ प्रतिशत नाफा कमाएको छ । अर्को कुरा १४० रुपैयामा पेट्रोल किनेको म आफैले हो । आज कति छ पेट्रोलको मूल्य ११० होइन ? (अन्तरर्वार्ताको लिने क्रममा ११० थियो) । यो ३० रुपैयाँ कमी हो । हामीले घटाउदा अली कम समाचार लेख्यौ वा पढ्यौ । बढाउदा बढी लेख्यौं । त्यसकारणले यस्तो भएको हो । लकडाउनको बेला कच्चा तेलको मूल्य २० डलरमा आएको बेला त्यो अनुसार घटाएको भए अहिले हामीले बढाउन सक्ने थिएनौ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १४० बाट घटाए पनि यातायात व्यवसायीले घटाएनन् । निगम जति पारदर्शी र व्यवस्थित व्यवसायिक परिस्थिती बुझ्ने अर्को संस्था छैन ।
मूल्य कतिसम्म पुग्ने देखिन्छ ?
हामीसँग मूल्य स्थिरीकरण कोषलाई प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा सीमाभन्दा बढी नोक्सानी नहोस् भन्ने हो । ७५ डलर कच्चा तेलको मूल्य भनेको १३० रुपैयाभन्दा बढी हो । हामी ११० रुपैयाँमा छौं । जसमा १८ देखि २० रुपैयाँ बढ्न सक्छ । जुन निगम र सरकारले धान्न सक्दैन । प्रतिलिटरमा १ रुपैयाँ नोक्सान हुनु भनेको दैनिक ८० लाखको नोक्सानी हो ।
पेट्रोलमा कर बढी भयो, कर घटाउनेमा सुझाव दिनुभएको छ कि छैन ? जे गर्दा पनि पेट्रोलमा कर थोपर्ने कत्तिको जायज हो ?
खरिद मूल्यमा २४० प्रतिशत तिरेर ल्याएको गाडी चढ्न ४० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढी नै हो । भारतको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा बढी कर लागेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थ खपत घटाउनेमा सोच्नुपर्यो । त्यसो हुँदा यसको लागत कम हुने हो । २० टनको गाडीले २५ टन बोक्न नहुने हो । हिजो बाटो खराब थियो । काठमाडौं विराटनगरको रुटको गाडीमा ३० सिटको गाडी ३५ को बनाउँदा हुँदैन । लागत घटाउने विषय भनेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर मात्र हो । तेलको राजस्वको हिस्सा ठूलो छ । यो भनेको २० प्रतिशत हो । हामीलाई विकास पनि चाहिएको छ । विकासका लागि कर तिनुपर्छ । त्यो हिसाबले पनि सोच्नुपर्यो ।
ओपेक देशका निर्णयअनुसार सबैभन्दा ठूलो उत्पादक साउदी अरबले १० लाख ब्यारेलमात्र उत्पादन गर्ने भनेको छ । त्यसले पेट्रोलको मूल्य बढ्ने जोखिम छ । तर, निगमले आफूलाई सुधार नगर्ने बरु मूल्य मात्र बढाउनेमा ध्यान दिन मिल्छ ?
यस विषयमा हामी सबैले १० वर्ष अगाडि नै सोचेका छौं । आजको दिनमा निगगको खर्च भनेको अन्यन्त न्यून छ । २५÷३० पैसा मात्र खर्च छ । अहिले उपभोक्तालाई भार बोकाउन पर्ने देखिएको छैन । निगमको कर्मचारीको खर्च ब्याज आम्दानीबाट भएको छ । अरु खर्च पाइपलाइनको बचतबाट नै उठेको छ । आजका दिनमा जे जति पैसा थप हुन्छ त्यो बढेको मूल्यका लागि मात्र हो । निगमको खर्चका लागि हुँदैन । निगमको बचत र निगमले अन्य स्रोतबाट कमाएको पैसाबाट निगमको खर्च चल्ने हो । बाहिर बढे अनुसारको मूल्य लिन पाउने हो भने निगम घाटामा जाँदैन ।
बाह्य स्थिती हेर्दा मूल्य कतिसम्म जाने आँकलन निगमले गरेको छ ?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कच्चा तेल र डलरको मूल्यले प्रभाव पार्ने हो । अहिले डलरले मूल्य ११६ मा स्थिर भएर बसेको छ । हिजोको दिनजस्तो १२२ भएको भए धान्न नसक्ने स्थिती हुन्थ्यो । कच्चा तेलको मूल्य अहिले हरेक दिन १ डलरले बढ्ने स्थितीमा छ । निगमको बुझाइमा आगामी जुलाइसम्म ७५ अमेरिकी डलरसम्म कच्चा तेलको मूल्य पुग्ने देखिएको छ । विभिन्न अध्ययनले ९० अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने अनुमान पनि देखाएका छन् ।
मूल्य बढ्ने जोखिम देखियो । उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी निगम चलाउने योजना के बनाउनु भएको छ ?
निगमको ठाउँमा निजी क्षेत्र भएको भए के हुने थियो भनेर सोच्नुपर्छ । आज निजी क्षेत्रले बेचेको भए हरेक दिन बढ्ने हो । हामीले नोक्सानीमा मात्र नबेच्ने सोचाइ बनाएको हो । मूल्य स्थिरिकरण कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँ भएको हामीले देखेका छौ । त्यो भनेको सामान्य हो । आजका दिनमा १ महिनामा पौने २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान छ । त्यही भएर नै स्वचालिन मूल्य प्रणाली अनुसार बढाउन दिनुपर्छ । यसलाई राजनीतिक विषय बनाउनु भएन । निगमको सोचाइ नाफा नगर्ने र घाटा पनि नहुने गरी नै बेच्ने हो ।
आज जति छौ । सरकारमा हुनेले पनि र नहुनेले पनि यो कुरा बुझ्नु भएको छ । निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ । त्यसलाई देश र जनताको हितमा प्रयोग गर्ने हो । अटोप्राइस अनुसार चलाएको भए मूल्य पहिले नै बढ्ने थियो । ३ महिनादेखि नोक्सानमा भएपनि हिजो कमाएको पैसाले धानिएको हो ।
नेपाल र भारतमा मूल्यको अन्तर धेरै फरक छ । नेपालबाट भारततर्फ चोरी निकासी हुने गरेको देखिन्छ । यसलाई रोक्न कसरी सकिन्छ ?
यो विषय मूल्यमा जोडिएको छ । मूल्यको अन्तरलाई हामीले ३ प्रकारले हेर्नुपर्छ । निगमले बढी लागतमा पेट्रोलियम पदार्थ किनेका छै्रन । हामीले धेरै कर उठाएका छैनौं । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले पनि कम कर उठाएको छ । भारतमा भन्दा ४० रुपैयाँ कम मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ दिएपछि हाम्रा उद्योग व्यवसायी प्रतिस्पर्धी पनि हुनुपर्यो । भारतको मूल्य हेर्ने हो भने १५ प्रतिशतसस्तो छ । यसको लाभ उद्योगी व्यवसायीले पनि उठाउनुपर्यो । भारततर्फ अवैधरुपमा निकासी हुन नदिनका लागि हाम्रा संयन्त्रहरुले काम गरिराखेका छन् ।
घाटामा गएको उदयपुर सिमेन्टलाई नाफामा लगेर आउनुभयो । निगममा अहिलेसम्मको कार्यकालमा के गरेजस्तो लाग्छ ?
उदयपुरमा निकै असजिलो परिस्थितीमा काम गरेको हो । निगममा पनि कोभिडको कारण भएको लकडाउनमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति सम्भव भयो । लकडाउनमा १० दिनभित्रमा कुनैपनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहज भएन । त्यो बेला कर्मचारीहरु कोभिड लाग्छ भन्ने डरले घरमा बसेनन् । निगमका कर्मचारीले जोखिम नै मोलेर भएपनि सहज आपूर्तिका लागि काम गरे ।
घर बनाउने क्रममा डीपीसीसम्म उठाउने काम कठिन हो । निगममा पनि हामीले डीपीसीसम्म उठाउने काम गरेका छौ । हिजो हामी जुन सोचमा थियौं आज योजनामा छौ । अब योजना कार्यान्वयन चरणको छ । अब ११ महिनाको कार्यकालमा धेरै योजनाहरु अगाडि बढ्ने छन् ।
अहिले हामीले अमलेखगञ्जसम्म डिजेल पाइपलाइनबाट ल्याएका छौ । पाइपलाइन बिस्तारको योजना र पूर्वाधार थप्ने योजनामा के काम भएको छ ?
झापाको पाइपलाइन र अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना निगमको हो । यसको लागतको विवरण आइसकेको छ । यो प्रक्रिया अब छिट्टै अगाडि बढ्छ । लोथरको पाइपलाइन नबनाउने हो भने अमलेखगञ्जसम्म बनाएको पाइपलाइन पूर्णक्षमतामा प्रयोग गर्न सक्ने स्थिती छैन । हामीले त्यही पाइपलाइनमा पेट्रोल ल्याउन सक्छौ । सस्तो भएको बेला ल्याउनु छ भने हामीसँग भण्डारण गर्न सक्ने अवस्था छैन । हिजोमात्र भण्डारण भएको भए ३ करोड फाइदा हुने थियो । मूल्य घट्दा योजना बनाएर किन्न सक्ने थियौ । अहिले त्यो सम्भावना छैन । झापा र लोथरमा पाइपलाइन बनाउने योजना अगाडि बढाउने प्रस्ताव अब सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने तयारीमा छौ ।
तथ्यांक हेर्दा एलपीजीको खपत बढ्दो छ । घरायसी प्रयोजन र औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत बढेको छ । घरायसी र औद्योगिकलाई मूल्य फरक गर्ने योजना के छ ?
अहिले विजुली आउँछ, ग्यासको पाइपलाइन किन बनाउनुपर्यो भन्ने कुरा भयो । अहिले एउटा सिलिण्डरका लागि १०० रुपैयाँ ढुवानी खर्च लाग्छ । अब बिजुलीले रिप्लेस गर्छ भन्ने सोचाइ आयो । जसका कारण ग्यासको पाइपलाइनको योजना हट्यो । कुनै पनि योजना बनाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न समय लाग्छ । हामीले सर्भे समेत गरिसकेका छौं । डिजेलको पाइपलाइनसँगै ग्यासको पनि पाइपलाइन आउने थियो । लक्ष्यअनुसार त तामाकोशी आइसक्नुपर्ने थियो ।
विजुलीले बिस्थापन गरेर एलपीजीको मूल्य बढाउनुपर्छ । एलपीजी घाटा खाएर बेच्नुभन्दा विजुलीमा सहुलियत दिए हुन्छ । यो फरक मूल्य राख्नु हुँदैन ।
एलपी ग्यास पाइपलाइनबाट ल्याउन निगम तयार छ । हामीले एलपी ग्यासको भण्डारण बढाउने योजना बनाएका छौं । अहिले बर्दिबाससम्म रेलको लिकको काम सकिएको छ । हाम्रो सर्लाहीको लालबन्दीमा १४ बिगाह जग्गा छ । त्यहाँ रेल जाने सम्भावना छ । त्यो हुँदा सर्लाहीमा भण्डारण गर्नेे योजना छ । एलपी ग्यासको पाइपलाइन बनाउने योजनामा सबैको राय एउटै भएन । त्यसको कारण एलपीजी पाइपलाइनको काम अगाडि बढेन ।
अहिले अमलेखगञ्जसम्मको पाइपलाइनमा डिजेलमात्र आएको छ । पेट्रोल कहिलेदेखि आउँछ ?
पाइपलाइनको ३० प्रतिशत प्रयोग हुँदा निगमलाई १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ । ११ प्रतिशत आयात कम हुँदा हामीलाई पाइपलाइनले पौने २ अर्ब बचत भएको छ । यो क्षमता पूर्णरुपले चलाउदा के हुन्थ्यो भन्ने सोच्नुपर्छ । अमलेखगञ्जको क्षमताले पूर्णक्षमतामा पाइपलाइनबाट तेल ल्याउन सम्भव छैन । त्यहाँ बनाउने परिस्थिती छैन । हामीले त्यसलाई पाइपलाइन लोथरसम्म लगेर त्यहा भण्डारण गर्ने योजना बनाएको हो । अहिले हाम्रो पाइपलाइन २४÷२५ दिनभन्दा बढी चलेको छैन । अबको २ वर्षभित्रमा पेट्रोल पाइपलाइनबाट ल्याउने योजना छ । मध्यकालीन योजनामा अमलेखगञ्जमा हामीले भण्डारण क्षमता बढाउने हो दीर्घकालीनरुपमा लोथरसम्म पाइपलाइन बनाएर भण्डारण क्षमता बढाउने हो । अहिले ४ दिनसम्म लगातार तेल ल्याउँदा अमलेखगञ्जको भण्डारण पूर्ण हुने अवस्था छ । पाइपलाइनबाट १५ दिनसम्म पूर्णक्षमतामा ल्याउने योजना हो ।
भारतमा पेट्रोलियम पाइपलाइनमा चोरीको समस्या छ । नेपालमा यस्तो समस्या आउन नदिन के योजना बनाउनु भएको छ ?
भारतमा जस्तो चोरी हुने सम्भावना नेपालमा छैन । यसको सुरक्षा सेनाले लिएको छ । त्यसबाहेक हाम्रो टिमले पनि नियमितरुपमा नियमन गरेको छ । सेन्सर जडान गरिएको छ । त्यस्तो जोखिम छैन ।
काठमाडौं उपत्यकामा पनि भण्डारण क्षमता बढाउने योजना थियो । त्यसमा के भएको छ ?
पोखरामा हामीले क्षमता बढाएका छौं । काठमाडौंको हकमा थानकोट अब बस्ती बढी भयो । हामीलाई अब पब्लिकलाई बुझाउन गाह्रो छ । जब फास्टट्रयाक बन्छ थानकोट अत्यावश्यक अवस्थाका लागि मात्र भण्डारण चाहिने हो । काठमाडौं आउन वैकल्पिक बाटो तयार भए । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग बनेपछि उपत्यकाको हकमा ठूलो भण्डारण बनाउन आवश्यक देखिएको छैन । हामीसँग जग्गा पनि छैन । त्यसको लागत बढी छ ।
निगमको प्रवन्ध निर्देशकको हिसाबले सोच्दा पेट्रोलियम पदार्थको व्यवसाय कहिलेसम्म चल्ने सोच्नु भएको छ ?
हामी केटाकेटी हुँदा नेपाल सरकारको राम्रो जागिर खाने ठाउँ टिम्बर कर्पोरेशन हुन्थ्यो । अहिले म आफैं निगमको नेतृत्वमा छु । भोलिका दिनमा निगम टिम्बर बन्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छु । यो हामी सबैको चिन्ता हो । हिजो ब्याट्रीमा चार्ज गरेर डिजेलबाट चल्ने गाडी रिप्लेस गर्ला भन्ने सोच थिएन । अब हाइड्रोजनले त्यसलाई रिप्लेस गर्ने हो । हामीले विजुली पर्याप्त पाउने हो भने हाइड्रोजन बनाउन सकिन्छ । अहिले तयारी गरेनौं भने भारतबाट नै हाइड्रोजन आयात गर्नपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा आजसम्म मैले अध्ययन र अनुभवको आधारमा भन्ने हो भने सरकारले जुन क्षेत्रमा लगानी गरेर पैसा कमाउने बाटो देखाएको छ । त्यहाँ निजी क्षेत्रको लगानी आएको छ, औद्योगिकरण भएको छ । सरकारले जग हालेको क्षेत्रमा निजी लगानी आएको छ । सरकारले हाइड्रोजनमा लगानी गर्नुपर्छ । अहिले हामीले निजी क्षेत्रको मुख ताक्नु हुँदैन । सरकार नै लाग्नुपर्छ ।
निगमले एकाधिकार जमाएर व्यापार गरेको छ । यस्तै संस्था निजी संस्थामा चाहिदैन ?
निगमको एकाधिकार होइन । निगमले नाफा कहाँ कमाएको छ र ? हाम्रो लोगो प्रयोग गरेवापत पम्पहरुले पैसा कमाएका छन् । निगमले आयात मात्र गरेको हो । निगमबारे बुझाइ नै गलत भयो । सरकारले आयात मात्र गरेको हो । सरकारले नुन पनि साल्ट ट्रेडिङमार्फत् आयात गर्छ । निजी क्षेत्रले पैसा कमाउने ठाउँ देखेको हुँदा आरोप लगाउने गरेका हुन् । सबैको दोष निगमले लिनुपर्ने ? निजीकरण गरेर मात्र हामीले के पाएका छौ । त्यो पनि हेर्नुपर्यो । दैनिक आवश्यक पर्ने वस्तुमा सरकारकै नियन्त्रण चाहिन्छ । भारतमा रिलायन्सले पाए पनि सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यवसाय गर्ने हो ।
नयाँ लाइसेन्स हल्ला मात्रै, बीमा कम्पनीको पूँजी कम छ: समिति अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवाल
कोरोनाको कारण समस्या परेका ऋणी कालोसूचिमा परेका छैनन्ः किरणकुमार श्रेष्ठ
सेयर बजारबाट २० वर्षमा ४० गुणा कमाएँः निरञ्जन टिबरेवाल
फेकन एप निर्माण गरी प्रभावकारी सञ्चारमा जोड दिनेछुः फेकनका महासचिव पदका उम्मेदवार राजु निरौला